FANAMPIAN’NY FANJAKANA IREO SAHIRANA : Mitohy manenika ny Fokontany eto an-drenivohitra
Ny sabotsy lasa teo no nosantarin’ny Filoha Andry Rajoelina ny fizaràna fanampiana ho an’ireo fianakaviana marefo eto an-drenivohitra. 4 août 2020
Tsy tapitra tamin’iny fotoana iny ny hetsika fa nitohy saika nanenika an’ireo Fokontany sy boriborintany teto an-drenivohitra, omaly. Vary iray gony miaraka amin’ ireo kojakoja isan-karazany ilaina amin’ny fiainana andavanandro no natolotry ny Fitondram-panjakana hoentina hanampiana an’ireo tokantrano tra-pahasahiranana, amin’izao fotoana izao. Ireo tompon’andraikitra eny ifotony no manao fandaminana amin’ny fitsinjarana sy ny fizaràna izany mba tena hipaka any amin’ireo fianakaviana tena sahirana sy marefo ara-pivelomana. Ho an’ny boriborintany voalohany, faharoa, fahatelo sy fahaefatra ary fahaenina dia fantatra fa tokantrano miisa 1 200 no hahazo ireo tosika ara-tsôsialy avy amin’ny Fitondram-panjakana ireo.
Miisa 1 800 kosa ireo tokantrano sahirana hisitraka izany ho an’ny boriborintany fahadimy. Efa nisy ny toerana manokana isaky ny boriborintany natao hizaràna an’ireo fanampiana ireo, araka ny fandaminana isaky ny Fokontany tsirairay. Ny Filoha Andry Rajoelina izay nanambara fa vonona ny hanohana sy hanampy hatrany an’ireo tokantrano tena sahirana ny Fitondram-panjakana izay tarihiny. Tsy hijery na hitazana fotsiny ny fitarainan’ny vahoaka noho ny fiantraikan’ireo fepetra ara-pahasalamana izay noraisina mba hifehezana ny valanaretina Covid-19. Hentitra ihany koa ny Filoha raha nilaza tao anatin’ny lahateniny mba tena ho ireo olona tokony hisitraka ny fanampiana no hahazo izany. Natao izao hetsika izao mba hampihenana ny fahasahiranam-bahoaka.